Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Badeecadaha Pelican -ka oo ay heli doonto Platinum Equity
Platinum Equity ayaa maanta ku dhawaaqday saxeexa heshiis dhammaystiran si loo helo Alaabada Pelican, oo ah hoggaamiye caalami ah xagga naqshadeynta iyo soo saaridda kiisaska ilaalinta-waxqabadka-sare iyo qalabka adag ee loogu talagalay xirfadleyda iyo xiiseeyayaasha dibedda, iyo xallinta silsiladda sahayda heerkulka ee warshadaha daryeelka caafimaadka.
Shuruudaha maaliyadeed lama shaacin. Macaamilka ayaa la filayaa in la dhammaystiro dhammaadka rubuca afaraad ee 2021.
Pelican wuxuu ku shaqeeyaa laba qaybood oo aasaasi ah: Alaabada Pelican waxay naqshadeysaa oo soo saartaa kiisas ilaalin oo adag oo heer sare ah, nidaamyada nalalka la qaadan karo ee horumarsan, iyo badeecadaha macaamiisha ee dibedda ah oo loogu talagalay dowladda aadka u adkeysi leh, suuqyada ganacsiga iyo macaamiisha. Peli BioThermal waxay siisaa xirmooyin dhammaystiran oo ah xalalka xakamaynta heerkulka aan tooska ahayn ee loogu talagalay tijaabooyinka caafimaad ee koritaanka sare iyo suuqyada ganacsiga biopharma.
"In ka badan 45 sano Pelican waxay dhistay summad xoog leh oo leh sumcad si wanaagsan looga kasbaday macaamiisheeda dalbanaya oo daacad u ah samaynta qaar ka mid ah alaabada aan la burburin karin adduunka," ayuu yiri Platinum Equity Partner Jacob Kotzubei. "Waxaa naga go'an inaan dhisno dhaxalka hodanka ah ee shirkadda iyo inaan maalgelinno hal -abuurnimada sii socota."
Xarunteedu tahay Torrance, CA, Pelican waxay haysaa 12 goobo wax -soo -saar, 17 xarumood adeeg iyo saldhigyo shabakad, iyo 23 xafiisyo iib oo caalami ah oo ku baahsan 25 dal.
"Iyada oo leh raad -soo -saarid caalami ah iyo shabakad qaybinta ballaaran, Pelican waa goob aad u wanaagsan oo kobcinta wax -ku -oolka leh oo leh fursad la taaban karo labadaba suuqyadeeda muhiimka ah iyo qeybaha ku dhow," ayuu yiri Agaasimaha Maareynta Sinnaanta Platinum Matthew Louie. "Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno kooxda maamulka shirkadda oo aan u dirno agabkeena hawlgalka iyo M&A si aan u taageerno wejiga xiga ee kobaca iyo ballaarinta Pelican."
Maamulaha guud ee Pelican Phil Gyori ayaa sii wadi doona hoggaaminta shirkadda ka dib macaamilka.
“Markaan hore u sii soconno annaga oo taageerayna Platinum Equity, waxaan ku kalsoonahay in kobaca Pelican uu sii ahaan doono mid xooggan, badeecadaheena iyo adeegyadeena ay sii ballaarin doonaan si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisheena,” ayuu yiri Mr. Gyori. "Waxaan rajeynayaa inaan kor u qaadno gacmaheena, oo aan ka wada shaqeyno kooxda khibradda leh ee Platinum, oo aan u abuuro cutub cusub oo xiiso leh sheekada Pelican."
Gibson Dunn & Crutcher LLP ayaa siinaya la -taliye sharci Willkie Farr & Gallagher LLP waxay siinayaan latalinta maalgelinta deynta Platinum Equity ee iibsiga Pelican. BofA Securities ayaa hormuud ka ah maalgelinta deynta.
Credit Suisse waxay u adeegtay la -taliye maaliyadeed oo gaar ah Latham & Watkins LLP waxay u noqdeen la -taliye sharciyeed Alaabooyinka Pelican.